> Resource> QuickTime> QuickTime Rotator: Olee bugharia QuickTime Videos
N'oge ndị na dị ka agbapụ vidiyo na ha ekwe ntị karịa obere video camcorders. Ma, mgbe ụfọdụ ndị na obere vidiyo nwere ike gbara ekwesị, n'ihi ya, ha na-ele iju mgbe egwuri na kọmputa ebe ha na-agaghị na nkịtị kehoraizin ọnọdụ na-atụ anya site nkiri. Iji nweta ziri ezi video, i kwesịrị bugharia ya. Ezie na ị nwere ike nweta nkwalite ndị QuickTime ọkpụkpọ ka pro version bugharia, usoro a yiri onye na-ntakịrị mgbagwoju. Lee, m nwere ike ikwu dị irè QuickTime rotator- Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) inyere gị aka bugharia QuickTime videos mfe. Ugbu a na-agbaso nduzi n'okpuru iji hụ otú ọ na-arụ ọrụ.
Bugharia QuickTime faịlụ, apụ ị kwesịrị ị na mbubata ya ka usoro ihe omume site na ịpị "Import" bọtịnụ na isi windows. Nke a QuickTime rotator nakwa na atụmatụ a ikpuru-n-dobe ọrụ, n'ihi ya, ị nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe faịlụ site na File Explorer ka onye ọrụ Album.
2 Bugharia QuickTime File
Mgbe ahụ, ịdọrọ QuickTime faịlụ site na onye ọrụ Album ka video track na usoro iheomume. Mgbe ahụ abụọ pịa ya na-emeghe edezi panel. Na video kọlụm, e nwere 4 bugharia buttons. Ha ọrụ na-depụtara n'okpuru:
Bugharia 90 degrees klookwaisi. Pịa ha ọtụtụ ugboro nke mere na ị nwere ike bugharia video 180 ogo, 270 degrees na bugharia azụ mbụ ọnọdụ.
Bugharia 90 degrees anticlockwise. Yiri nke mbụ button ma na ihe mgbochi - direction.
Tụgharịa QuickTime faịlụ horizontally, isi n'ala.
Tụgharịa QuickTime faịlụ ekwesị, ekpe gaa n'aka nri.
Pịa kwekọrọ ekwekọ bọtịnụ bugharia gị QuickTime faịlụ. Ị pụrụ ịhụ ezigbo oge n'ihi na preview window.
3 mbupụ na-agba gburugburu QuickTime File
Mgbe n'usoro n'usoro QuickTime faịlụ, pịa "Mepụta" button iji zọpụta ya. Ị nwere ike ma zọpụta na mbụ format ma ọ bụ ịgbanwe ọzọ format dị ka AVI, WMV, FLV, MPEG, wdg ke "Format" taabụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ọhụrụ faịlụ na ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad na iPod, na-aga "Ngwaọrụ" taabụ ma họrọ a ngwaọrụ site na listi. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ozugbo bulite ziri ezi vidiyo na YouTube ma ọ bụ ọkụ na-DVD discs nke na-ekiri na TV.
Nke mere na bụ ezigbo mfe, yeah? Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe, na-aga n'ihu ma na duba gburugburu edit window a bit. Na ịpị site na taabụ, ị ga-ahụ dị iche iche na-edezi ohere gị nkiri na m n'aka na Filmora bụ ngwá ọrụ dị ike na ị dịghị ghọtara i nwere.
Download Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) free ikpe:
Olee otú bugharia 3GP / 3GP2 Video Files